Yobhi 21 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
21 Waza waphendula uYobhi wathi: 2 “Liphulaphuleni ngenyameko ilizwi lam,Le mayibe yintuthuzelo yenu. 3 Ndinyamezeleni, kwaye mna ndiza kuthetha;Emva kokuba ndithethile ngamnye wenu angagculela.+ 4 Mna ke, ngaba ukuxhalaba kwam kubonakaliswa emntwini?Okanye kutheni na umoya wam ungaphelelwa ngumonde? 5 Bhekisani ubuso benu kum nize nindijonge nithe manga,Nibeke izandla zenu emlonyeni wenu.+ 6 Ukuba ndikhumbule, kwakhona ndiye ndaphazamiseka,Yaye inyama yam ibanjwe kukutyhwatyhwa. 7 Kutheni abangendawo beqhubeka bephila,+Besiba badala, besongama nangendyebo?+ 8 Inzala yabo imiselwe ngokuqinileyo phambi kwabo,Nabo baphuma kubo phambi kwamehlo abo. 9 Izindlu zabo ziluxolo, azinkwantyi,+Yaye intonga kaThixo ayikho phezu kwabo. 10 Inkunzi yakhe yenkomo iyamithisa, yaye ayiwachithi amadlozi;Imazi yakhe yenkomo iyazala,+ ayiphunzi. 11 Amakhwenkwana abo baqhubeka bewathuma njengomhlambi,Yaye abantwana babo abangamakhwenkwe baqhubeka behamba bedloba. 12 Baqhubeka bephakamisa ilizwi labo ngentambula nohadi,+Kwaye baqhubeka benemihlali bakuva isandi sempempe. 13 Iimini zabo bazichitha ngokuba nexesha elimnandi,+Yaye ngomzuzwana bayehla baye eShiyol. 14 Bathi kuTHIXO oyinyaniso, ‘Suka kuthi!+Ukwazi imithetho yakho akusiyolisi.+ 15 Uyini na uSomandla, le nto sifanele simkhonze,+Yaye singenelwa njani kuba sinxulumene naye?’+ 16 Khangela! Impilo-ntle yabo ayikho semandleni abo.+Icebo labangendawo likude nam.+ 17 Sicinywa kangaphi na isibane sabangendawo,+Yaye intlekele yabo ibafikela izihlandlo ezingaphi na? Ubahlulela kangaphi na intshabalalo emsindweni wakhe?+ 18 Ngaba banjengeendiza ngaphambi komoya,+Nanjengomququ obhudlwa luqhwithela? 19 UThixo uya kukubekela oonyana bakabani ukwenzakalisa kwakhe;+Uya kumvuza ukuze akwazi oko.+ 20 Amehlo akhe aya kukubona ukuxhwaleka kwakhe,Yaye uya kusela umsindo kaSomandla.+ 21 Kuba luya kuba yintoni na uyolo lwakhe endlwini yakhe emva kwakhe,Xa inani leenyanga zakhe liya kwahlulwa kubini ngokwenene?+ 22 Ngaba uya kumfundisa ukwazi kwanoThixo,+Ngoxa Lowo egweba abaphakamileyo?+ 23 Lo uya kufa ebudeni bokwanela kwakhe ngokupheleleyo,+Xa engakhathali ngokupheleleyo yaye ehleli ngokukhululeka; 24 Xa amathanga akhe ezaliswe ngamanqathaNomongo wamathambo akhe ugcinwe ufumile. 25 Yaye omnye lo uya kufa enomphefumlo okrakraNgoxa engazidlanga izinto ezilungileyo.+ 26 Baya kulala kunye eluthulini+Yaye iimpethu ziya kubagubungela.+ 27 Khangela! Ndizazi kakuhle iingcinga zenuNamacebo eniya kundigonyamela ngawo.+ 28 Kuba nithi, ‘Iphi na indlu yalowo usisidwangube,Yaye iphi na intente, iminquba yabangendawo?’+ 29 Ngaba akubabuzanga abo bahamba ngeendlela?Ngaba akuyihloli ngenyameko imiqondiso yabo, 30 Ukuba ngemini yentlekele onobubi uyayekwa,+Ngemini yokuvutha komsindo uyahlangulwa? 31 Ngubani na oya kumxelela indlela yakhe ebusweni bakhe?+Yaye ngubani na oya kumvuza ngoko akwenzileyo?+ 32 Yena ke, uya kuziswa emangcwabeni,+Yaye kuya kubakho umlindo engcwabeni. 33 Kuye amagada omhlaba wentlambo aya kuba mnandi ngokuqinisekileyo,+Yaye uya kurhuqa lonke uluntu emva kwakhe,+Nabo babelinani elingabalekiyo phambi kwakhe. 34 Ngoko hayi indlela enizama ukundithuthuzela ngokulilize ngayo,+Neempendulo zenu zisala zikukungathembeki!”